चुँडियो सारंगीको तार...- समाचार - कान्तिपुर समाचार
चुँडियो सारंगीको तार...
‘यो दाजुको मिर्मिरे आँखा’ का सर्जक धनबहादुर गायकलाई बढी मोह नयाँ पुस्ताले पनि सारंगी सिक्नुपर्छ भन्नेमा थियो । उनी सारंगी सिकाउँथे, भेला र जमघटमा आफैं बजाउँथे ।
माघ १३, २०७७ दीपक परियार, सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — चर्चित गीत ‘यो दाजुको मिर्मिरे आँखा’ पछिल्लोपटक पुनः रेकर्डिङ भएर नयाँ पुस्ताको स्वरमा आयो । नयाँ रेकर्डिङ अघि पनि यो निकै चलेको गीत हो । नेपाली संगीत जगत्‌मा उक्त सदाबहार गीत थप्ने सर्जक पोखरा बाटुलेचौरका धनबहादुर गायकको सोमबार निधन भएको छ ।
धनबहादुर गायक तस्बिर : रासस
उच्च रक्तचापले बेहोस भएपछि गत शनिबार उनलाई मणिपाल शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
उनी ५९ वर्षका थिए । उनको लेखन तथा संगीतमा प्रवीण गुरुङ र बीमाकुमारी दुराले गाएको ‘मिर्मिरे आँखा’ लोक भाकाको चर्चित गीत हो । गुरुङकै स्वरमा रहेको ‘फूल मायामा नभुल’, ‘बेली र चमेली’ मा समेत धनबहादुरकै शब्द/संगीत छ । धनबहादुर चर्चित सारंगीवादकसमेत थिए । पोखराको बाटुलेचौरमा जन्मिएका उनको सारंगी संरक्षणमा योगदान छ ।
उनले झलकमान गन्धर्व सारंगी पाठशाला खोलेर नयाँ पुस्तालाई संगीत सिकाउँदै आएका थिए । राष्ट्रिय लोकबाजा सारंगी संरक्षण पाठशाला प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहेका उनी संस्कृति संरक्षणका लागि भन्दै गन्धर्व संग्रहालय भवन बनाउने अभियानमा सक्रिय थिए ।
विसं २०३१ मै उनले रेडियो नेपालको काठमाडौं स्टुडियो पुगेर विभिन्न लोकगीत रेकर्ड गराएका थिए । पोखरा फर्किएर पनि अरू गीत रेकर्ड गरे । पोखरामा उनले सारंगी र मादलको प्रशिक्षकका रूपमा लामो समय काम गरे । नेपाली फिल्म कान्छी, सन्तान, पहिलो प्रेम, के घर के डेरा, फेरि भेटौंला, सिन्दूर र जापानीज छोटो फिल्ममा उनको नृत्य र सारंगीवादकका रूपमा अभिनय गरेको देख्न पाइन्छ ।
पोखरा लोक संगीत समूहका अध्यक्ष उनी हिमाली सांस्कृतिक समूह, संगीत प्रशिक्षण केन्द्र, पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवार, शुक्ला साहित्य समिति गन्धर्व समाज, गन्धर्व संग्रहालय भवन निर्माण समिति, लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान कास्कीलगायतका संस्थामा आबद्ध थिए । उनको निधनले लोकगीतको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति भएको लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकीका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङले बताएका छन् । गन्धर्वको सोमबार नै पोखरामा अन्त्येष्टि गरिएको छ । धनबहादुरको श्रीमती, एक छोरी र दुई छोरा छन् ।
जीवनका झन्डै चार दशक उनको हातमा सारंगी टुटेको थिएन । लोकसंगीतलाई माथि उठाउन उनले सारंगीसँगै मादललाई पनि लिएर हिँडेका थिए । नयाँ पुस्तालाई नेपाली मौलिक संगीतको स्वाद दिनुपर्छ भनेर अहोरात्र खटिने सर्जक धनबहादुर गायकले सधैंको निम्ति विश्राम लिँदा बाटुलेचौरको गन्धर्व बस्ती शोकाकुल छ । गन्धर्व समुदाय विकास केन्द्रका सल्लाहकार हर्क गायक भन्छन्, ‘सारंगीवादनमा सबैलाई हौस्याउने अगुवालाई हामीले गुमायौं ।’
सारंगी संस्कृति गन्धर्व समाजको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको संस्कृति भएकाले जोगाउनुपर्ने धनबहादुरको धारणा थियो । त्यसैले उनी बालबालिकालाई सारंगी सिकाउँथे । नयाँ पुस्ता बिस्तारै अन्य पेसा तथा व्यवसायतिर आकर्षित हुन थाल्दा सारंगी बजाउने सीप बिर्सिनेमा उनलाई चिन्ता थियो । त्यसैले प्रशिक्षण गराउने मात्र नभई कार्यक्रम, भेला र जमघटमा सारंगी बजाउन उनी आफैं अघि सर्थे ।
धनबहादुर दिग्गज लोकगायक झलकमान गन्धर्वका भान्जा थिए । नेपाली संगीत जगत्मा मामाको योगदानलाई अपेक्षित रूपमा स्मरण नगरेको दुखेसो उनी गर्थे । मौलिक लोकसंगीत सिर्जना र संरक्षणमा आफ्नो जीवन अर्पेका झलकमानकै स्मरण र सारंगी संरक्षणका लागि उनले पाठशाला स्थापना गर्न अगुवाइ गरेका थिए ।
लोक संस्कृति तथा सारंगीमा धनबहादुरको योगदान अतुलनीय रहेको गन्धर्व सांस्कृतिक कला संगठनका अध्यक्ष पुजन गन्धर्वले बताए । ‘लोकबाजा सारंगी संस्कृति संरक्षणकर्ताका रूपमा उहाँ हाम्रा लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नयाँ पुस्तालाई उहाँले जीविकोपार्जनसँगै संस्कृतिका रूपमा ढालेर सारंगीलाई सिकाएर जानु भो ।’
उनले धनबहादुरलाई एक कुशल सारंगीवादक, मादलवादक, लोकसंगीतका प्रशिक्षक तथा नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्वका रूपमा स्मरण गरे ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७७ ०८:०६
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहस : ‘प्रधानमन्त्रीको विकल्प परीक्षण हुनुपर्थ्यो’
न्याय क्षेत्रको सबैभन्दा जेठो मान्छेलाई नटुवा भन्न पाइन्छ श्रीमान् ? – कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभाबाट अर्को विकल्प नखोजी गरिएको विघटन गैरसंवैधानिक हुने दाबी गरेका छन् ।
संविधानमा नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना गरेका उनीहरूले अधिकार रहेकै भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास हुनुपर्नेमा नभएकाले विघटनको सिफारिस औचित्ययुक्त नरहेको बताएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बारम्बार अघि सारेको प्रश्नकै प्रतिवाद गरे । जबराले बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान किन नपाउने भनी प्रश्न गरिरहेका थिए । ‘यो इजलासले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा अर्को सरकारको विकल्प थियो कि थिएन भनेर खोज्ने होइन,’ उनले भने, ‘तपाईंसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने हो ।’ बहुमतको आडमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकका अधिकार कटौतीका साथसाथै संविधानमा हुँदै नभएका अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
थापाले संसद् विघटनको ऐतिहासिक विकासक्रम कोट्याउँदै बेलायतमा श्रीपेच (राजसंस्था) को विशेषाधिकारका रूपमा रहेको यो अधिकार कटौती गरेर निकै सीमित गरिएको बताए । कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलुकहरूले त्यसको अनुसरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान सक्ने व्यवस्था राखेका थिए ।
मुलुकको सार्वभौमसत्तासँग समेत जोडिने त्यो अधिकार अहिले धेरै मुलुकमा कटौती भएको उनको जिकिर थियो । ‘श्री ५ सँग सार्वभौमसत्ता भएका बेला यो विशेषाधिकार थियो होला,’ उनले भने, ‘अहिले हामीसँग श्री ५ पनि छैनन् । जनतालाई सार्वभौम मानिसकेपछि यसरी विघटन गर्न पाउने त कल्पनै नगर्नुस् ।’
उनले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभाको अधिकार अतिक्रमण गर्न नसक्ने जिकिर गरे । कुनै आधार नभएकाले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा विघटनसँग सरोकारै नभएका धारा प्रयोग गरेको उनले बताए ।
अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधान निर्माताको मनसाय पनि हेर्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर त्यसबाट सम्भव नभए विघटनको परिकल्पना गरी संविधानसभामा धारा ७६ मा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘अब त प्रधानमन्त्री असफल भए संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिने हो, दलले अर्को नेता चयन गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको मनसायविपरीत विघटन गर्न सक्छ र ?’
यहीबीचमा प्रधानन्यायाधीशले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई कसरी बदनियत भन्ने ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले बहुमतको सरकारलाई संविधानले विघटनको अधिकार नदिएकामा त्यस्तो निर्णय गरेकाले स्वतः बदनियत देखिने भनी जवाफ दिएका थिए । ‘संविधानले दिएको सुविधाअनुसार जनतामाझ जाने हो,’ उनले भने, ‘संविधान मिचेर मनपरी रूपमा जाने होइन, त्यसैले बदनियत देखियो भनेको हो ।’
‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अदालतकै अवहेलना’
९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिबारे संवैधानिक इजलासमा कुरा उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामाथिको सुनुवाइका क्रममा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीबारे ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबारे इजलासमा प्रश्न उठाएका हुन् । संवैधानिक इजलासमा सोमबारको बहस सकिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले न्याय क्षेत्रको ज्येष्ठ व्यक्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए । ‘न्यायको सम्मान गर्ने मान्छे हुँ, न्याय क्षेत्रको सबैभन्दा जेठो मान्छेलाई नटुवा भन्न पाइन्छ श्रीमान् ?’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने उक्त विषयमा छलफल गर्न नसकिने बताए । उनले उक्त विषय इजलासमा प्रवेश गरेमा फेरि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट पनि निवेदन आउने भएकाले समय लिने बताए । उनले अहिले उक्त विषयमा केही भन्न नहुने सुझाएका थिए । ‘समय मिल्यो भने गरौंला नि है,’ जबराले भनेका थिए । अन्य कानुन व्यवसायीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भनाइ इजलाससमक्ष राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नभई न्याय क्षेत्रको अवहेलना गरेको भण्डारीले बताए । उनले आफूबारे प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराले सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूको अपमान भएको धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीको तर्फबाट बहस गर्न वकालतनामा भरेका छन् । गुरुङलगायतको पक्षबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग भण्डारीले गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानीसँग भण्डारीको तुलना गर्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सही नभएको बताए । उनले भने, ‘राम जेठमलानी उपस्थित हुँदा थरथर हुन्थे भारतमा तर हाम्रामा कृष्णप्रसाद भण्डारी उपस्थित हुँदा ठट्टा हुने ? कानुन व्यवसायीले तास फिटेको जस्तो हुने ? तमासा हुने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी आफ्ना गुरुको पनि गुरु भएको भन्दै कार्यकारी प्रमुखले कानुन व्यवसायीको अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिन नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले माघ ९ गते एक कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी र वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नेपाल बारलगायतले विरोध जनाउनुका साथै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पनि पेस गरेका छन् ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७७ ०७:५७